Fonjan’Ambalatavoahangy: nirefodrefotra ny basy, gadra fito lahy nanao fiokoana | NewsMada
Nanakoako nandritra ny adiny roa ny poa-basy tao amin’ny fonjan’Ambalatavoahangy, ny asabotsy maraina teo. Fantatra fa nanao fiokoana ny gadra fito lahy ka naka an-keriny mpiandry fonja roa lahy. Fampidirana rongony tao anatin’ny fonja ny niandohan’ny fifanjevoana.
Nirefodrefotra nandritra ny adim-pamantaranora roa be izao ny poa-basy tao anatin’ny fonjaben’Ambalatavoahangy, ny asabotsy 20 jolay 2019 teo nanomboka tamin’ny 7 ora sy 30 mn maraina izany ka hatramin’ny 10 ora teo ho eo vao nifarana. Hatairana ny an’ny rehetra mihazo ny lalana manakaiky ny fonja eo Anjoma Toamasina sy ny manodidina iny. “Fa misy inona ao amin’ny fonja?”, hoy ny fanontanian’ny olona rehetra teny an-dalana sy ireo teo amin’ny manodidina. Fotoana fohy taorian’izay koa, tonga teny an-toerana ny polisim-pirenena nifanome tanana sao misy fandosirana voafonja. Nambaran’ny talem-paritry ny fandraharahana fonja ao Toamasina, i Napou Jeremy, fa tsy fitsoahana mpifonja ny niseho fa voafonja iray antsoina hoe Claude Arsone Eric izay efa voatsara ary nahazo sazy dimy taona an-tranomaizina, sazy mihatra miampy asa an-terivozona, no nampiditra rongony tao am-ponja ka nahatonga ny olana. Nosazin’ny mpiandry fonja ity gadra nampiditra rongony ity ka nitaona ny namany hikomy izy ary namparatra mpiandry fonja iray mihitsy izany sady nitarika ny fikomiana tao anatin’ny fonja, araka ny fanazavan’ny talem-paritry ny fandraharahana fonja hatrany. Nohamafisin’ity talem-paritra ity fa tsy i Eric irery ny nanao azy fa miisa fito ireo tena atidohan’ny fikomiana ka zandary teo aloha voafonja noho ny fanafihana mitam-piadiana ny iray amin’izy fito lahy ireto. Tao amin’ny efitrano fahadimy misy ireto voafonja tena maditra no nisehoan’ny fikomiana. Raha vao nosokafan’ilay mpiandry fonja malaza ratsy ho mpidaroka voafonja ny varavarambin’ireo efitrano fahadimy ireo tamin’ny 7 ora sy 30 mn, nodarohin’i Eric ity ary nampian’ireo namany enina hafa ka anisan’izany ilay zandary ity mpiandry fonja mpanao herisetra ity.
“Misy ny tsy fanajana ny zon’ny voafonja…”, hoy ireo gadra
Voaporofo, araka ny fijoroana vavolombelona nataon’ny fianakavian’ireo voafonja sasany, fa misy ny kolikoly eo amin’ny fampidirana sakafo sy entana ho an’ireo voafonja izay manamora ny fampidirana zava-mahadomelina ao amin’ny fonjaben’Ambalatavoahangy. Voalazan’ireo voafonja sasany kosa fa tsy zakan’izy ireo intsony ny daroka sy ny fampijaliana ataon’ilay mpiandry fonja mpandaroka ireto voafonja ireto. Noporofoin’ny loharanom-baovao avy ao amin’ireo voafonja ireo hatrany fa tsy nihevitra ny hitsoaka ny fonja mihitsy izy ireo fa haneho fikomiana fotsiny satria tsy zakan’izy ireo ny fampijaliana ataon’ny mpiandry fonja sasany. Voalaza fa amin’ny fotoana tsy maha eo ny talem-paritry ny fonja, manao izay danin’ny kibony amin’ny tsy fanajana ny zon’ny voafonja ireo mpiandry fonja ao anatiny. Manginy fotsiny ny herisetra mahazo ireo voafonja ka nahatonga azy ireo nikomy sy nitazona an-keriny ary nandratra ilay mpiandry fonja iray. Tsy mifanaraka intsony koa amin’ny isan’ny voafonja ny efitrano hitazonana azy ireo.